Thola kude ne-resort Ocean kanye nokubukwa kwechibi kusuka kuyunithi. - I-Airbnb
Thola kude ne-resort Ocean kanye nokubukwa kwechibi kusuka kuyunithi.
Dolphin Heads, Queensland, i-Australia
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-John
Indawo yami iseduze noLwandlekazi iPacific, emaphethelweni asenyakatho yeMackay yimizuzu engama-25 kuphela ukusuka esikhumulweni sezindiza futhi iyimizuzu emi-5 ukusuka ezitolo. ulwandle. Igumbi linekhishi elinosinki, ifriji kanye ne-microwave.(njengekamelo lasehhotela). Itholakala ngaphakathi kwendawo yokungcebeleka enendawo yokudlela kanye nebha.
Iyunithi iyiyunithi yesitayela sehhotela ene-50 inch smart TV ikhishi elinebhentshi le-Cesar Stone nosinki kanye nesiphephetha-moya esimangalisayo. Akukho kulokhu okuzoqashelwa uma uhlezi kuvulandi futhi ubuka phezu kwechibi elibheke olwandle. Njengoba nje usesiqhingini.
Kuyinani elimangalisayo lemali ngoba sibheke ukubuyisela izindleko kuphela njengoba kungokusebenzisa isikhathi sethu samaholide. Ngezimpelasonto iyunithi izoqasha ngo-$170 ngobusuku futhi ayitholakali, ngakho-ke sebenzisa inani lentengo phakathi nesonto.
4.57 · 75 okushiwo abanye
Usebhishi ngeWitsudays. Kufana nokuhlala esiqhingini. Uma amagagasi aphansi ungahamba uye ehhotela lase-Emio endaweni kanye namabhishi agadiwe
Hlola ezinye izinketho ezise- Dolphin Heads namaphethelo